लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
सम्बन्ध राम्रो बनाउने सन्दर्भमा सल्लाह-सुझाव चाहियो भने तपाईं कहाँ खोज्नुहुन्छ? बाइबलमा वा अरू किताबमा? बाइबलमा भएको बुद्धिको कुरा हजारौं वर्षअघि लेखिए पनि हालसालै गरिएको अनुसन्धानसित कसरी मेल खान्छ, विचार गर्नुहोस्
सन्‌ २०१४ मा १८-२५ वर्षका युवाहरूबीच एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो। यसअनुसार ६१ प्रतिशत युवाहरूको विचारमा विवाहअघि यौनसम्बन्ध राख्नु “भारतमा कुनै नौलो कुरा होइन।” हिन्दुस्तान टाइम्स समाचारपत्रलाई मुम्बईको एक जना चिकित्सकले यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गरे, “विवाह गर्ने उद्देश्यले नै युवाहरू विपरीत लिङ्‌गका व्यक्तिहरूसित चिनजान बढाउँछन्‌ भन्ने छैन। तिनीहरूको लागि कसैसित एक रात बिताउन, कुनै सोचविचार नगरी सम्बन्ध राख्न अथवा विवाह नगरी सँगै बस्न वचनबद्ध हुनुपर्छ भन्ने छैन।”
यसबारे सोच्नुहोस्: विवाहअघि यौनसम्बन्ध राख्दा यौनजन्य रोग लाग्ने अनि भावनात्मक पीडा हुने बढी सम्भावना हुन्छ कि विवाहपछि?—१ कोरिन्थी ६:१८.
परिवारका सदस्यहरूसित बारम्बार खटपट पर्ने व्यक्तिको ३५-५० वर्षको उमेरमा मृत्यु हुने जोखिम दोब्बर हुन्छ। कोपेनहेगनको विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले लगभग १० हजार अधबैंसे व्यक्तिको ११ वर्ष लगाएर अध्ययन गरेका थिए। यस अध्ययनले परिवारका सदस्यहरूसित मिलेर बस्ने व्यक्तिभन्दा ठाकठुक परिरहने व्यक्तिको अकालमै मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ भनेर देखायो। एक अनुसन्धानकर्ताले भनेअनुसार चिन्ता र चुनौतीको सामना गर्ने अनि मनमुटाव सुल्झाउने व्यक्तिको “अल्प आयुमै मृत्यु हुने जोखिम धेरै कम हुन्छ।”
बाइबल के भन्छ? “अनुभवीले थोरै शब्द मात्र बोल्छ, समझशक्ति भएकोले ठण्डा मिजास राख्छ।”—हितोपदेश १७:२७.
लुइसियानामा ५६४ नवविवाहित जोडीको अध्ययन गरियो। त्यस अध्ययनअनुसार विवाह अगाडि भेटघाटको क्रममा धेरै पटक एकअर्काबाट छुटिने अनि फेरि मिल्ने जोडीहरू विवाहको पाँच वर्षभित्र अलग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। तिनीहरूको धेरै झगडा पर्छ अनि आफ्नो वैवाहिक जीवनमा त्यत्ति खुसी हुँदैनन्‌।
बाइबल के भन्छ? “जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्‌नुभएको छ, त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्टाओस्।”—मत्ती १९:६. (g16-E No. 2)